Maaliyadda 1-aad ee ay ku ciyaari doonto Kooxda Liverpool xilli ciyaareedka dambe oo si qarsoodi ah loo helay… + SAWIRRO – Gool FM
(Liverpool) 16 Abril 2020. Maaliyadda ay ku ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Liverpool ee dalka Ingiriiska marka ay gurigeeda ku dheelayso ayaa si qarsoodi ah daaha looga qaaday.
Reds maaliyaddaan ay ku dheeli doonto kal ciyaareedka dambe 2020-2021 marka ay joogto garoonkeeda taasoo si qarsoodi ah loogu faafiyey Internet-ka ayaa loo naqshadeeyay qaab u muuqaal eg maaliyadda casaanka ah ee ay muddooyinkii dambe ku ciyaarayso kooxdu.
Maaliyaddaan cusub ee ay Liverpool ku dheeli doonto marka ay mininkeeda joogto fasal ciyaareedka soo aaddan ee 2020/21 waxaa si qarsoodi ah ku heshay oo sii daysay footyheadlines.com oo inta badan shaaca ka qaaday labiska ay kooxuhu ku dheeli doonaan ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin.
Funaanaddaan ay ku dheeli doonto Reds marka ay garoonkeeda ku sugan tahay xilli ciyaareedka soo aaddan ayaa la mid ah ama u muuqaal eg middii uu ku dheelay xulka qaranka Portugal koobkii Adduunka ee 2018.
Shirkadda Nike ayaa farsameysay funaaddaan, waana mid lagu xusuusan doono musiibadii Hillsborough oo ay ku geeriyoodeen 96 taageere oo kooxda ah 31 sano ka hor.
Maaliyaddaan cusub ee Liverpool FC ay ku dheeli doonto 2020-21 ayaa sida qorshuhu yahay waxaa la bilaabi doonaa ka hor 01 bisha June sanadkan 2020.
Wargeys baahiyay sababta uusan xiddiga Barcelona ee Antoine Griezmann ugu biireyn Kooxda Inter Milan